နစ်မြုပ်မှာ Data Center ကို Server များအရည်အအေးခံခြင်း China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ကွန်ပျူတာ Worth ဒါဟာအေးအရည်,ဂိမ်းအဘို့ သာ. ကောင်း၏အရည်အေးနေသည်,တိတ်ဆိတ်မှုအရည်အေးနေသည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ > Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ > နစ်မြုပ်မှာ Data Center ကို Server များအရည်အအေးခံခြင်း
အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ:
* Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia သည်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်စံပြရေခဲသေတ္တာနှင့်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်-controlled အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်;
* အလတ်စားအနိမ့်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်အအေးအဆိုပါ Fluorocarbon အလွန်အလယ်အလတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အပူအစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာနဲ့ stably အလုပ်လုပ်နိုင်သေချာ, ရေငွေ့ပျံ၏အပူမှတစ်ဆင့်ကွာအပူကိုယူပြီးသောအလုပ်၏သင်တန်းတွင်ရေငွေ့ပျံ, ရှိ၏
* Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာဖြစ်ပါတယ် Non-မီးလောင်လွယ်ခြင်းနှင့် Non-ပေါက်ကွဲ, မီးကိုမမှတ်နှင့် flash ကိုအမှတ် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ non-အန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများ,
* Professional ကသန့်ရှင်းရေး Solutions ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ, 40KV အထက်အလွန်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့;
*2doesn`t အောက်က dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာစင်တာကိုပလီကေးရှင်းကိုဆုံးရှုံးဒေတာလုပ်;
* အဆိုပါဖလိုရင်းသန့်ရှင်းရေးအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေထက်ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းသောလျော့ပြေ, ဒီအရည်ဓာတုနိမ့်, ကောင်းစွာစီးဆင်းနှင့်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်စနစ်အပူငျ့သှားနိုငျသညျ
* Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာဖြစ်ပါတယ် Nontoxic, အန္တရာယ်ကင်း non-နာကျင်ကျိန်းစပ်;
* ပစ္စည်း Coating0ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတရှိသည် ODP တန်ဖိုးနှင့်အလွန်အမင်းနိမ့် GWP တန်ဖိုးကို
ထုတ်ကုန်၏ရူပ parameter သည်:
ဓာတု Coating အသုံးပြုခြင်းကို:
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာဒီစီးရီးသာကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်-controlled အပူအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်
အဆိုပါဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ link ကိုများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောလွန်ကျူးမှုစနစ်, ဒါပေမဲ့
လည်းကျယ်ပြန့်သည့်နှစ်မြှုပ်ခြင်းကွန်ပျူတာဆာဗာကို system အတွက်အအေးနှင့်အခြားအအေးဖို့လျှောက်ထား
ဘက်ထရီနှင့် phased Array Radar စသည်တို့ကို
ဓာတု Coating ထုပ်ပိုး:
ထုတ်ကုန်၏ဤစီးရီး 25kg / စည်နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်များအတွက်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ > Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက် 110 ဒီဂရီဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်0င် ODP အရည် Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်အမြင့်တည်ငြိမ်ရေး Perfluorinated အရည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဒေတာများကို Server ကိုများအတွက်အလတ်စားရေခဲသေတ္တာအေး Fluorocarbon အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်အနိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ Dielectric Coating အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်များအတွက် Enviromental Friendly Perfluorinated အရည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘေးကင်းလုံခြုံ Dielectric Coating မှာ Data Center ကိုဆာဗာများအတွက် Paint အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာအရည်နောက်ဆုံး Long ကအေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကွန်ပျူတာ Worth ဒါဟာအေးအရည် ဂိမ်းအဘို့ သာ. ကောင်း၏အရည်အေးနေသည် တိတ်ဆိတ်မှုအရည်အေးနေသည် ကွန်ပျူတာ Youtube ကိုအေးအရည် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှအေးအရည် ကွန်ပျူတာများအတွက် Fluorocarbon ဆန့်ကျင်မိုးအေးဂျင် ရေတွန်းလှန် Glass ကိုအေးဂျင့်